Shiinaha warshad tuubo muunad qaadaysa la tuuro iyo soosaarayaasha | Limeng
Ujeedada iyo sharaxaadda xirmada muunad qaadista viruska
1. Waxaa loo isticmaalaa aruurinta iyo qaadista hargabka kiliinikada, hargabka avian (sida H7N9), fayraska gacanta-luga-afka, jadeecada iyo noocyada kale ee fayraska iyo sidoo kale mycoplasma, ureaplasma iyo chlamydia tijaabada
2. Fayraska iyo shaybaarka la xiriira waxaa lagu keydiyaa oo lagu qaadaa 48 saacadood gudahood xaalad qaboojiye ah (2-8 digrii).
3.Fayraska iyo shaybaarada laxiriira oo lagu keydiyey -80 digrii ama nitrogen dareere ah mudo dheer.
A) Haddii shay-baarka la soo uruuriyay loo adeegsado soo ogaanshaha fayraska nucleic acid, xirmooyinka soo saarista nukliyeerka iyo reagents ogaanshaha nucleic acid waa in la adeegsadaa; haddii loo isticmaalo go'doominta fayraska, qalabka dhaqanka unugyada waa in la adeegsadaa.
B) Meelaha dalabyada kaladuwan waxay leeyihiin shuruudo kaladuwan oo ku saabsan xaddiga xamuulka qaadista dareeraha muunadda. Fadlan dooro badeecada ku habboon sida waafaqsan tilmaamaha ku jira macluumaadka dalbashada:
Tubbada muunad qaadista si ay u soo ururiso shaybaarka fayraska bukaanka bukaan socodka, qadarka dareeraha ah ee loo baahan yahay guud ahaan waa 3.5ml ama 5ml.
Qaadista tuubada muunad qaadista iyo gaadiidka muddada-gaaban ee fayraska hargabka avian ee deegaanka dibedda, xaddiga dareeraha ah ee loo baahan yahay guud ahaan waa 5mL ama 6ml.
Magaca Badeecada: Tuubada muunad qaadista ee la tuuro
Cabbirka: 18mm * 100mm 50 / sanduuqa shakhsiyaadka waxaa ka mid ah tuubbo * 1, isku beddel * 1.
Qaybaha ugu muhiimsan ee muunad qaadista tuubada:
Saldhigga Hank ee dareeraha, gentamicin, antibiyootikada fungal, BSA (V), cryoprotectants, keydka noolaha iyo amino acids.
Iyada oo ku saleysan Hank, iyadoo lagu darayo BSA (kooxda shanaad ee BOVINE serum albumin), HEPES iyo qaybaha kale ee xasilloon ee fayrasku waxay dayactiri karaan waxqabadka fayraska ee heerkulka ballaaran, yareeyn kara heerka burburka viruska, iyo hagaajinta heerka wanaagsan ee go'doominta fayraska.
Isticmaalka Qalabka Muunad Samaynta
1. Kahor muunad qaadista, ku calaamadee macluumaadka muunada ku habboon calaamadda tuubada sampalka.
2. Marka loo eego shuruudaha muunad qaadista ee kala duwan, suufka waxaa loo isticmaalaa in lagu tijaabiyo goobta u dhiganta.
3. Si dhakhso leh u dheji suufka tuubo tijaabo ah.
4. Ka jab qeybta qaybta suufka tuubada muunad qaadka oo adkee daboolka tuubada.
5. Tijaabooyinka tijaabada ee dhowaan la soo ururiyey waa in la geeyo shaybaarka muddo 48 saacadood gudahood ah 4 ° C, kuwa ku dhici waaya in loo soo qaado shaybaarka muddo 48 saacadood gudahood ahna waa in lagu kaydiyaa -70 ° C ama ka hooseeya. Tijaabooyinka waa in la tallaalaa oo la kala saaraa sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah ka dib marka loo diro shaybaarka. Kuwa lagu tallaali karo laguna kala saari karo 48 saacadood gudahood waxaa lagu keydin karaa 4 ℃ .Haddii aan la tallaalin; waa in lagu kaydiyaa -70 ℃ ama ka hooseeya.
Suufiyada Pharyngeal: Ku tirtir labada qumanka xiiqda iyo darbiga dambe ee pharyngeal suufka, mar kale quusin madaxa suufka xalka tijaabada, oo ka saar dabada. (Ku habboon sambal ahaan sheygan)
Hore: La tuuro laastikada dhegaha dhegaha
Tube Sampling Blank ah
Tube Madhan oo La Tuuri Karo
Tube la tuuro
Tube Madhan Caafimaadka
Tube Sampling Medical